Global Voices teny Malagasy » Shina: Nosamborina Nandritra Ny Fihetsiketsehana Nataon’ny Mpanohitra Ilay Mpikatroka Miliaridera Wang Gongquan · Global Voices teny Malagasy » Print
Shina: Nosamborina Nandritra Ny Fihetsiketsehana Nataon'ny Mpanohitra Ilay Mpikatroka Miliaridera Wang Gongquan
Voadika ny 02 Oktobra 2013 4:16 GMT 1	 · Mpanoratra Oiwan Lam Nandika Naomy
Nosamborina ary notànan'ny polisy ao Beijing ilay mpandraharaha miliaridera Wang Gongquan tamin'ny 13 Septambra 2013 satria voarohirohy ho nitarika “famoriam-bahoaka hoentina hanakorontanana ny filaminana ara-tsosialy”, famoretana hafa indray izay mikendry  ireo lehiben'ny fanehoan-kevitra, manam-pahaizana sy mpikatroka amin'ny aterineto sy ivelan'ny aterineto.
Anisan'ny mpiandraikitra ny fampielezan-kevitry ny Antoko Kaomonista Shinoa tao amin'ny faritra Jilin i Wang Gongquan  [zh]. Niala tamin'izany asa izany izy ary nanapa-kevitra hanao asam-barotra tao atsimon'ny faritra Hainan tamin'ny taona 1988. Nosamborina sy nogadraina nandritra ny herintaona izy taorian'ny famoretana tamin'ny 4 Jiona tao amin'ny kianjan'i Tiananmen,  niverina teo amin'ny sehatry ny fandraharahana izy tamin'ny taona 1993 ary nanjary filoha-lefitry ny orinasa Vantone, orinasa fampandrosoana ny fananana trano aman-tany. Niditra teo amin'ny sehatry ny varotra indray izy tamin'ny taona 2005 ary lasa miliaridera noho ireo fampiasam-bola namokatra tamin'ny fiandohan'ny taona 2000.
Olo-malaza ao Shina i Wang Gongquan noho ireo harenany sy ny safidiny. Sariny tao amin'ny fono-pejin'ny gazetiboky Nanfang People tamin'ny taona 2011.
Tsy tahaka ireo mpandraharaha hafa, mpikambana mavitrika eo anivon'ny fiaharamonim-pirenena i Wang. Tamin'ny taona 2005, niditra mpikambana tao amin'ny “Open Constitution Initiative” [Fandraisana an-tanana ho amin'ny Lalampanorenana Misokatra], fantatra amin'ny anarana hoe Gongmeng, natombok'i Xu Zhiyong  izy ary nanomboka niaro ny zon'olombelona sy nampiroborobo ny fampandrosoana ny fiarahamonim-pirenena Shinoa an-tanibe tamin'ny alalan'ny fanentanana fanangonan-tsonia an-tserasera sy ny gazety. Tamin'ny taona 2010, namoaka fanambarana iombonana antsoina hoe “fanolora-tenan'ny olom-pirenena” i Wang Gongquan sy ireo mpikatroky ny zon'olombelona sasany, fanambarana izay mametraka fotokevitra sy masontsivana amin'ny fandraisana anjara ara-tsosialy sy politika ataon'ny olom-pirenena araka ny voafaritra sy arovan'ny zo voafaritry ny lalàmpanorenana. Heverina ho fivoahana ampahibemaso ny Hetsika Vaovaon'ny Olompirenena izany hetsika izany.
Tamin'ny volana Jolay 2013, nosamborina i Xu Zhiyong  ary nogadraina satria voarohirohy ho nanao “famoriam-bahoaka ho fanakorontanana ” noho ity hetsika vaovao ity. Anisan'ireo mpikatroka miady ho amin'ny famotsorana an'i Xu tamin'ny alalan'ny fanangonan-tsonia izay nahangona sonia an'arivorivony i Wang.
Ankehitriny, i Wang mihitsy no voasambotra, ka nisy ny fanentanana fanangonan-tsonia nataon'ireo namany ho fitakiana ny famotsorana azy. Manam-pahaizana maherin'ny 200  no nanasonia ny fitakiana iombonana tamin'ny 14 Septambra 2013:
Mpanohana ny hetsika vaovaon'ny olom-pirenena i Wang Gongquan. Ny tena fikasany dia ny hiaro ny zon'ny olom-pirenena amin'ny fomba milamina sy ara-dalàna araka ny voasoratra ao amin'ny Lalàmpanorenana. Amin'ny fiarovana ny zon'ny olom-pirenena, handroso ny fiarahamonim-pirenena ary mety hanampy an'i Shina amin'ny fiovana milamina. Ny tanjona dia ny hanangana fiarahamonina vanona manana fahalalahana sy fahamarinana, fitiavana ary voninahitra.
Mifototra amin'ny finoany ny hetsika ataony. Bodista izy, mpandala ny maha-olombelona sy tia filaminana. Mana-panahy izy, tsotra, ary be fiantrana sady tompon'andraikitra. Misokatra amin'izao tontolo izao sy ny mponina ao amin'izany izy.
Avotsòry i Wang Gongquan, omeo lalana ny fiantrana, ny fahalalahana ary ny fiovana anaty filaminana. Ry namana hajaina, raha mianjera ny akanim-borona, vaky avokoa ny atody rehetra. Aza avela handroso manohitra ny sivilizasiona maoderna sy ho tafalatsaka ao anatin'ny hantsan'ny fahalozàna ny firenentsika. Mila miaro ny fiarahamonim-pirenena isika ka hihetsika hiaro ny tsirairay, anisan'izany ny tenantsika.
Naneho hevitra manohana an'i Wang ny mpamahana Bilaogy fohy kely maro. Na da nampidirin'ny Sina Weibo, habaka malaza amin'ny bilaogy fohy kely ho anatin'ny voambolana “atahorana” noho ny sivana aza ny anarany tamin'ny 15 Septambra 2013, dia mbola nahitàna hafatra maneho fanohanana marobe ihany. “Tatitry ny fanadihadiana nataon'ny [gazety] Faran'ny Herinandron'ny Tatsimo” (@南周深度) dia nahitana fiderana an'i Wang tamin'ny safidy nataony: 
Olona nahafoy ny fandraharahana mitentina amina miliara ananany izy ho fiarovana ny vitsy an'isa. Nifidy ho toy ny olo-tsotra saingy olo-marina izy toy izay ho andevon'ny fananany. Mbola feno fitsikiana ny tavany na dia nampidirina am-ponja aza izy. Izay no safidiny, nisafidy ny fahafahana. Na dia any am-ponja aza ny tenany, mirehareha any ny fanahiny… Raha mihamaro ireo olona misafidy ny ho lasa olom-pirenena, maro ihany koa ireo olona misafidy ny fonja mba tsy ho andevo. Hampiova an'i Shina izany. Hotahiana anie ianao.
“Poeta antsy rahalahy” nizara  ny mombamomba an'i Wang tao amin'ny bilaoginy madinika:
Poeta, olom-pirenena ary mpandraharaha i Wang Gongguan. Nanangana [orinasa momba ny rindram-baiko] 360 izy, Hanting [hotely fandraharahana], ny Banky Minsheng, Meva Atsimo [trano fisakafoanana]. Tokony hiaina toy ny mpanjaka izy. Saingy toto-kena-kisoa sy vary no sakafony atoandro. Eo anilan'ireo sahirana izy, mitomany miaraka amin'izy ireo, misolovava azy ireo ary manompo azy ireo. Indray alina tamin'ny ririnina mangatsiaka, nandeha nitsidika fonja mainty  izy [fonja tsy ara-dalàna fanagadrana ireo mpanango-tsonia sy mpanasonia fitakiana tsy nandalo fitsarana], nandondona tao amin'ny vavahady vy miaraka amin'ireo mpanasonia hafa, ary niantso ny mpiambina mba hamoaka ireo olona nogadraina tsy ara-dalàna. Maro ny zava-bitany, azafady, mba manaova zavatra hiarovana azy.
Mpisolovava amin'ny Zon'olombelona, Tengbiao niaro  an'i Wang tao amin'ny Twitter ihany koa:
Amin'ireo Shinoa miliaridera, azo isaina amin'ny rantsa-tanana ny tsy mpanao kolikoly. Efa an-taonany maro no nahafantarako sy niarahako niasa tamin'i Wang. Matoky azy aho. Tsy vitany hoe olo-marina izy, fa tena mavitrika ihany koa amin'ny fiarovana ny zon'ny olom-pirenena. Mitolona ho amin'ny fitovian-jo amin'ny fianarana eo amin'ny mpianatra ambanivohitra sy andrenivohitra ihany koa izy, manohitra ny raharaham-pitsarana tsy ara-drariny izy, ary miaro ny firenena tan-dalàna. Safidy feno herim-po avokoa izany rehetra izany.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2013/10/02/51783/
 4 Jiona tao amin'ny kianjan'i Tiananmen,: http://en.wikipedia.org/wiki/Tiananmen_Square_protests_of_1989
 nosamborina i : http://www.freedomhouse.org/article/china-continues-target-new-citizens-movement-arrest-xu-zhiyong
 Manam-pahaizana maherin'ny 200: http://www.canyu.org/n80217c6.aspx
 fiderana an'i Wang tamin'ny safidy nataony: : http://weibo.com/2199130147/A9nMenYLa
 fonja mainty: http://en.wikipedia.org/wiki/Black_jails